août 2020 · déliremadagascar
Anisany antony faharoa idiran’ny olona ao amin’ny hopitaly Joseph Raseta Befelatanana (HRJB) ny aretin’ny taovam-pandevonan-kanina. Continuer la lecture →
Tafiditra amin’ny fandraisana andraikitry ny orinasa Ravinala Airports ny ady atao amin’ny coronavirus. Nisy ny fanomezana fitaovana ara-pahasalamana natolotra ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny 27 Aogositra 2020 teny amin’ny seranam-piaramanidin’Ivato. Continuer la lecture →
Manentana ny rehetra hanome rà an-tsitrapo. Nanome rà an-tsitrapo teny amin’ny trano fitehirizan-drà (CRTS) ao amin’ny HJRA Anosy ireo mpiara-monina, mpinamana sy mpiara-miasa tarihin’i Haingo Paradis. Continuer la lecture →
Nanao izay ho afany ny OJM na ny holafitry ny mpanao gazety nitady mpiara-miombon’antoka ho amin’ny fiahiana sy fanampiana ny mpanao gazety tsy ankanavaka ho amin’ny fampitaovana azy ireo, manoloana indrindra ny fiatrehana ity covid19 ity. Continuer la lecture →
Mahaleo tena ara-tsosialy sy ara-bola. Tsy fanjarian-tsakafo, fitsoahana an-daharana an-tsekoly, ny fahasarotana amin’ny fahazoana asa raikitra sy ahazoam-bola, ireo olana telo lehibe ireo no nahatonga ny Fondation Axian namolavola ny Voly First Immo. Continuer la lecture →
Mitohy ny fitsinjovana ireo tena sahirana ataon’ny ministeran’ny mponina miaraka amin’ny fikambanana Secours Islamique France eto Madagasikara(SIF). Continuer la lecture →
Novokarina tao amin’ny “FabLab Solidaire Mamiratra”. Nanolotra fanampiana ho an’ny CCO (Centre de Commandement Opérationnel) eny Ivato ny Orange Solidarité Madagascar ny 13 aogositra 2020. Continuer la lecture →
Socio-eco	 14 août 2020 R Nirina
Hanomboka amin’ny Alatsinainy 17 Aogositra 2019 ny fametrahana ny atonta-taratasy fangatahana findramam-bola ao amin’ny CNAPS (Caisse nationale de prévoyance sociale ) atao hoe « tsinjo fameno » ary mifarana amin’ny faran’ny volana septambra 2020 izany. Continuer la lecture →
Nahazo famatsiam-bola avy amin’ny Fondation du Lions Club International (LCIF) ny Lions Club Madagascar ho entina hanamafisana ny ady amin’ny coronavirus. Continuer la lecture →
Socio-eco	 7 août 2020 R Nirina
Hifandrimbonana ny fanampiana ireo mpiray tanindrazana. Iaraha-mahalala fa ao anatin’ireo marefo ireo ny mpatory an-dalana. Noraisin’ny ministeran’ny mponina ny fanangonana azy ireo. Continuer la lecture →